Latest Myanmar News – Page 244
နောက်နှစ်ထဲမှာ အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ့် လူပျိုကြီး ဝေဠုကျော်
December 9, 2018 Latest Myanmar News 0
ပရဟိတမင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်တွေက ဂုဏ်ပြုတံဆိပ်ကပ်ပေးထားတဲ့ “ဝေဠုကျော်” တစ်ယောက်ကတော့ နောက်နှစ်အတွင်းမှာ အိမ်ကပေးစားလို့ မိန်းမယူတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ ယနေ့အချိန်ထိ ရှိနေတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသားကြီး “ဝေဠုကျော်” ဟာ အနုပညာအလုပ်တွေအပြင် အများပြည်သူတွေအတွက် ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုပါ ဆထက်တပိုးထမ်းရွက်လို့ နိုင်ငံတော်အပြင် ပရိသတ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက ပေးအပ်တဲ့ဆုတံဆိပ်တွေရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဠုကျော် ကတော့ ရည်းစားနဲ့ပြတ်လို့တရားစွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့ […]
လက်ဆောင်ပေးသည့်လုံချည်ထဲစိတ်ကြွဆေးပြားထည့်ပြီးလုပ်ကြံမှုကြောင့်အစိုးရ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး၏ဇနီးဖမ်းဆီးခံရ စံမောင်သန်း၊ စစ်တွေ နိရဉ္စရာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင် လက်ဆောင်လာပေးသည့် လုံချည်များထဲတွင် စိတ်ကြွ ဆေးပြားများထည့်ပြီး လုပ်ကြံမှုကြောင့် အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ဦး၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဖမ်းဆီးခံနေရသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူမှာ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ နတ်ဆိပ်ကုန်ပုတ်ကျေးရွာနေ မြေစာရင်းရုံးစာရေး ဦးမောင်ပန်းဖြူ၏ ဒေါ်ဦးသိန်းညွန့် ဖြစ်သည်။ […]
ယနေ့တပ်ကုန်းမြို့ ငွေတောင်တောရကျောင်းမှာ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် သူထူးစံ နှင့် ထိုက်စုဝင်း
သရုပ်ဆောင် သူထူးစံတစ်ယောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မကုန်ခင် အချိန်ကာလလေးမှာ ပရိသတ်တွေကို Surprise လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဖေ့စ်ဘွတ် မှာ ပြန်နေ့တဲ့ သူထူးစံရဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကပ် အလှူဖိတ်စာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားလုံး အံ့သြခဲ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် သူထူးစံနဲ့ သရုပ်ဆောင် ထိုက်ဆုဝင်းတို့နှစ်ဦး က ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ […]
ထိုင်နေရာကနေ ရုတ်ခနဲ ထလိုက်ရင် ရိပ်ခနဲ မိုက်ခနဲ ခေါင်းမူးပြီး လူက ယိုင်သွားတာမျိုးကြုံဖူးလား?
ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ မူးသွားတာ ဘာကြောင့်လဲ … ? ထိုင်နေရာကနေ ရုတ်ခနဲ ထလိုက်ရင် ရိပ်ခနဲ မိုက်ခနဲ ခေါင်းမူးပြီး လူက ယိုင်သွားတာမျိုး လူအတော်များများ ကြုံဖူးကြ လိမ့်မည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်း သည် သိပ်မစိုးရိမ် လောက်သော ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ဖြစ်သော်လည်း […]
ဦးကျော်ရွှေသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်မှစ၍၎င်း၏ဇနီးဖြင့်အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာရှိခဲ့ကြောင်း၊အကြောင်းရင်းကိုကျန်တဲ့လူဂုဏ်သိက္ခာငဲ့ကွက်၍မပြောလိုပါ လို့ အစချီကာ ထောင်သရဲဘအုပ် ဆိုသူမှဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်တကွယခုလို့ဖေါ်ပြရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။အခင်းမဖြစ်မှီညနေကဦးကျော်ရွှေမှာအပြင်မှအရက်သောက်ပြန်လာပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်စကားများရန်ဖြစ်ကြပါတယ်ဘဏ်ထဲကငွေသိန်းတထောင်ထဲကသိန်းနှစ်ရာပျောက်လို့စကားများရာမှဇနီးဖြစ်သူကိုထိုးကြိတ်ထားတာဖူးရောင်ညိုမည်းနေတာ ဦးကျော်ရွှေမြေချရက်လည် လာတဲ့သူတွေတောင် တွေ့ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တနေ့မိုးလင်း၆နာရီခန့်လောက်မှာဦးကျော်ရွှေရဲ့လယ်အလုပ်သမားဦးသန်းစိုးဦးဂျက်မောင်မောင်ဦးချစ်စန်းတို့နဲ့အတူလယ်ထဲဆင်းရန်ပြင်ဆင်နေချိန်ဦးကျော်ရွှေကသူသောက်နေကျ(ဆေးပေါင်းခတံဆိပ်)နဲ့အရက်ကိုတခွတ်ငှဲ့သောက်လိုက်တယ်သောက်ပြီးပြီးခြင်းမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးသန်းစိုးရေ(ငါ့အရက်ထဲမှာအဆိပ်ပါသွားပြီသန်းစိုးရေသူတို့လက်ဦးသွားပြီကွ) အော်ဟစ်ညည်းတွားရင်း (၁၀) မိနစ်မကြာပါဘူး သန်းစိုး လက်ပေါ်တင်သွေးအန်ရင်းအသေဆိုးနဲ့သေခဲ့ရတာ လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီစကားတွေ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို ဖုံးဖိပြီး ဦးကျော်ရွှေဦးနှောက်သွေကြောပျက်သေတာပါဆိုပြီးနာရေးကိုဆက်လုပ်တယ် နာရေးကိုရွာနားပတ်ဝန်းကျင်က အသိတွေအမျိုးတွေလာကူညီလုပ်ကိုင်ကြတယ်။ သားတွေတူတွေသားမက်တွေ […]
ရဲမင်းပိုင်၏ ဖခင် သရုပ်ဆောင် ဦးဌေးဝင်း ကွယ်လွန်
သရုပ်ဆောင် ရဲမင်းပိုင်၏ ဖခင် သရုပ်ဆောင် ဦးဌေးဝင်းသည် ယနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်)နံနက် ၂နာရီ၊မိနစ် ၂၀ ခန့်က ကွယ်လွန် တချိန်ကမြန်မာဗွီဒီယို ဈေးကွက်တွင် ဖိုက်တင်မင်းသား အဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင် ရဲမင်းပိုင်၏ ဖခင် သရုပ်ဆောင် ဦးဌေးဝင်းသည် ယနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်) […]
သရဲ၊တစ္ဆေများမဝင်ရောက်နိုင်အောင်တောင် မောင်းထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ “ဆား” ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ
ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ တချို့ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းတွေက ဟင်းချက်ရာမှာပဲ အသုံးတည့်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး နှင့် အခြားသော နေရာတွေမှာလည်း တကယ်အသုံးဝင်တာကို မြင်တွေ့ရပါတယ် ။ ဆားများများစားတာကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါဘူး ။ သို့သော်လည်း ဆားဟာ သင့်ရဲ့ အိမ်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ တချို့သောပြဿနာရပ်တွေကိုတော့ […]
အသက်ထက်ဆုံး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရန် မိဘခြေရာတောင်းခံယူနည်း
မိဘခြေက္ခဏာ ခံယူပွဲသည် မြန်မာတို့၏ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်၍မြန်မာ မိသားစုတိုင်း ခံယူကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ကျေးဇူးရှင် မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့်ကုံလုံ ဆရာတော် ဘုရားကြီးတို့၏မိဘခြေရာ တောင်းယူပူဇော်နည်းမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိဘခြေရာ တောင်းယူသောနေ့ဟာမိဘရော သားသမီးတွေပါ မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့ (သို့မဟုတ်) မွေးရက်နှင့်မှတ်တမ်းအပ်သည့်နေ့များတွင်ကျင်းပလျှင် ပို၍ကောင်းမွန်၏။ မိဘခြေရာတောင်းယူ မည့်အချိန်မှာမိဘကော သားသမီးပါ ရေချိုးသန့်စင်ပြီးသန့်ရှင်းသောအဝတ်များ ဝတ်ဆင်ပြီးဘုရားစင် […]
ကိုယ့်အကောင့် Profile ကို ဘယ်သူတွေဝင်ကြည့်သွားလဲ သိချင်နေသေးလား?
မြန်မာပြည်ကတင် မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ Facebook user တော်တော်များများ သိချင်တဲ့ မေးခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့  က ကိုယ့် Profile ကို ဘယ်သူတွေ ဝင်ကြည့်သလဲ၊ ဘယ်နှစ်ယောက် က ဝင်ကြည့်သလဲဆိုတာကို သိအောင် Facebook မှာ ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ […]
ခွေးကိုက်ခံရပြီး ဆေးရုံကြီး ဆေးသွားထိုးမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံ (၁၄၃၀၀)မပါမဖြစ်ယူသွားကြပါ(၃၀၀)က ဆိုင်ကယ် အပ်ခပေါ့
December 8, 2018 Latest Myanmar News 1
ကဲ အမျိုးတွေနဲ့ (၇)ရက်သားသမီးအပေါင်းတို့ ခွေးဆိုရင် သတိသာထားကြဗျို့ ကျွန်တော်ကတော့ ခွေးကို သတိမထားမိလို့. အကိုက်ခံလိုက်ရတယ် အကိုက်ခံရတာ တန်ဖိုးမကြီးဘူးဗျ ဆေးဖိုးကတော့ အရမ်းတန်ဖိုးကြီးတယ် တစ်လုံးကို (၁၄၀၀၀)ကျပ်တဲ့ တစ်ခါထဲနဲ့လည်း မပြီးဘူးဗျ (၄)ကြိမ်တောင်ထိုးရမှာတဲ့ တစ်ရက်လုပ်မှတစ်ရက်စားဘဝဆို သေချာပေါက် ဆေးထိုးနိုင်မှာ မဟုတ်ဖူးဗျ ပြည်သူတွေကိုလည်း ပြန်ငဲ့ပေးပါအုန်း အခွန်တွေကောက်ပြီး […]
« 1 … 243 244 245 … 247 »